Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Eswatini Breaking News » Lahatsoratr'i Eswatini Nanaiky ny rehetra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Montigny Tanan'i Neal Rijkenberg ny Minisitry ny Fitantanambola any Eswatini ankehitriny dia nodoran'ny mpanao fihetsiketsehana tezitra
Olona ampolony novonoina, rava ny orinasa sy tranom-panjakana, tahotra ny ain'ny polisy sy ny olom-pirenena. Manaiky ny rehetra izao ny vahaolana dia ny miresaka.
Amin'ny fanidiana ny Internet dia ny mombamomba ny antoko fahatelo ihany no mivoaka avy ao amin'ny Fanjakan'ny Eswatini. Firenena milamina matetika no mifampiraharaha amin'ny andian'olona mahery setra sy mpamono olona, ​​ary mety ho mpikomy vahiny izy ireo.
Vondron'olona iray sosotra, ny praiminisitra mpisolo toerana, ary ny sehatra iraisam-pirenena no mangataka ny hisian'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny ankolafy rehetra sy ny fampiakarana ny herisetra sy ny asan-jiolahy, toy ny fanimbana orinasa, fandrobana entana ary famonoana olona.
Ny zanakavavin'ny Mpanjaka dia nanamafy tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Focus Africa nataon'ny BBC, fa heveriny fa vonona hihaino ny Mpanjaka.
Toa misy hetsika ara-dalàna sy milamina ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana maniry fanovana any Eswatini. Eo afovoan'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto dia misy olon-dratsy te hangalatra, hamono ary handrava. Miezaka ny hihilana ireo polisy izay matahotra ny ainy ihany koa. Ny fanaratsiana ny tombontsoa politika vahiny natao hametrahana fifandonana dia mety hiasa any aoriana.
Toy ny tafaporitsaka tamin'ny eTurboNews avy amin'ireo mpikambana ambony ao amin'ny governemanta, ary avy amin'ny mpikambana ambony ao amin'ny Fikambanana fizahan-tany afrikanina, dia toa mpikomy vahiny no nahetsika tao Eswatini hatramin'ny nanombohan'ity fifanolanana ity. Ny sasany amin'ireto mpikomy vahiny ireto dia nanakana ny arabe, nitafy fanamiana polisy, ary olom-pirenena novonoina mba hanomezana tsiny ny polisy. Mpiara-miasa amin'ny eTurboNews izay nitsoaka an'i Eswatini tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, dia nahita fihetsika mahatsiravina toy izany rehefa tsy maintsy nandeha tamin'ny sisin-dàlana nanandrana ny hahatongavan'ny sisintanin'i Eswatini- Afrika Atsimo.
Araka ny iray eTurboNews tatitra, hery iray manosika amin'ity fifanolanana ity toa misy ifandraisany amin'ny tsy fivadihan'i Eswatini sy ny fanjakana mitazona ny fifandraisana diplomatika amin'ny Repoblikan'i Sina, fantatra amin'ny anarana hoe Taiwan. Nahatezitra ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina nandritra ny taona maro izany. Eswatini no firenena afrikana tokana misy masoivoho Taiwanese.
Masoivohon'i Etazonia no hita fa manohana ny hetsika miaraka amin'i Taiwan sy Eswatini.
Resadresaka nifanaovana tamin'ny zanakavavin'ny Mpanjaka ny BBC Focus Africa
Raha tokony avela ny fihetsiketsehana am-pilaminana ara-dalàna, nitombo ny toe-draharaha ary nanjary zava-nisy ny fiainana sy ny fahafatesana ho an'ny rehetra, ny mpanao fihetsiketsehana, ny governemanta ary ny sisa amin'ny vahoaka Eswatini.
eTurboNews naheno tamin'ny polisy Eswatini iray. Natahotra ny ainy sy ny ain'ny fianakaviany isa-minitra izy. Araka ny fampitam-baovao dia matahotra mitovy amin'ny polisy ny olom-pirenena Eswatini. Fotoana hiresahana izao.
>> pejy manaraka hamaky bebe kokoa >>